Koorsada ArcGIS Pro iyo QGIS 3 - oo ku saabsan isla shaqooyinka
Baro GIS adoo adeegsanaya labada barnaamijba, isla qaab xog-ogaal ah Digniin Koorsada QGIS waxaa asal ahaan lagu abuuray Isbaanish, iyadoo la raacayo casharo la mid ah koorsada caanka ah ee Ingiriisiga Baro ArcGIS Pro Easy! Waxaan u sameynay inaan tusno in waxaas oo dhan ay suurta gal ku noqon karaan adeegsiga barnaamijyada furan; had iyo jeer Isbaanish Ka dib, qaar ka mid ah dadka isticmaala ...
Koorsooyinka ArcGIS Koorsooyinka QGIS
Baro sida loogu isticmaalo QGIS layliyo wax ku ool ah Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiyeed adoo adeegsanaya QGIS. -Dhammaan jimicsiyada aad ku sameyn karto ArcGIS Pro, oo lagu sameeyo softiweer bilaash ah. -Umport data CAD to GIS - Tixgalinta ku saleysan mawduucyada -Xisaab ku saleysan -Rule -Print layout -Isuduwaha laga soo qaado Excel -Scanning talooyin -Georeference images Faylasha oo dhan ...
Koorsooyinka - Geospatial Koorsooyinka QGIS